Ady amin’ny fahalovana :: “Hanabe ny olona handà kolikoly isika”, hoy ny tale jeneralin’ny Bianco • AoRaha
Ady amin’ny fahalovana “Hanabe ny olona handà kolikoly isika”, hoy ny tale jeneralin’ny Bianco
Nisantatra ny asa voalohany ho azy Andrianirina Laza Eric Donat, tale jeneralin’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (Bianco), omaly. Ny fiaraha-miasa miaraka amin’ny Vokovoko Mena Malagasy (CRM) no nanokafany an’izany ka hifototra amin’ny fanabeazana sy fanaraha-maso akaiky ny fomba fiasan’ireo mpikambana ao anatin’ity fikambanana misehatra amin’ny lafiny sosialy ity ny fifanarahana.
Haharitra roa taona io fifanekena eo amin’ny Bianco sy ny CRM io. Ny tale jeneraly roa tonta no nanatanteraka ny fifanaovan-tsonia, teny amin’ny foiben’ny Bianco Ambohibao, omaly.
Nandritra ny lahateny nataony no nilazan’ny tale jeneralin’ny Bianco, Andrianirina Laza Eric Donat, fa: “hobeazina amin’ny alalan’ny atrikasa samihafa ny olona mba handà kolikoly satria izany no hahafahana misoroka an’ireo trangana fahalovana”. “Raha tsy mandaitra ny fisorohana, dia hiroso amin’ny fanaovana fanadihadiana sy fanangonana porofo isika ka hatolotra any amin’ny fitsarana mahefa ny raharaha. Anjaran’izy ireo, avy eo, ny manasazy an’ireo mpanao kolikoly”, hoy izy.
Tetsy an-danin’izany dia nohazavain’ny tale jeneralin’ny CRM, Ralisoa Alice fa: “mba hialana amin’ny trangana fanodinkodinam-bola toy ny niseho tato amin’ny Vokovoko Mena teo aloha teo no antony hiarahana miasa amin’ny Bianco izao”.
Fitsaràna olona ambony Hanomboka hiasa aorian’ny fihanianan’ireo depiote mpikambana ny HCJ
Fanovana lalam-panorenana Miresaka momba ny vinavinan’ny fitsapan-kevi-bahoaka ny minisitry ny Serasera
Lalana mifehy ny mpanohitra :: Miditra an-tsehatra koa ireo antoko ivelan’ny Antenimierampirenena
Famerenana ny hasin’ny fitsarana :: Manamafy ny ady atrehina ny minisitra Randrianasolo Jacques